Global Voices Maitso Amin’ny Andron’ny Tany 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2018 4:47 GMT
Nankalaza ny 22 aprily, Andron'ny Tany, tamin'ny fizaràna ny heviny momba izay mety ho dikan'io andro io ireo mpitoraka bilaogy. Ny sasany namintina ireo lahatsoratra, ny sasany nizara lisitra ho vakiana ary ny sasany nifantoka amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro. Azontsika tsirihina ato anatin'ity tatitra fohy ity ny fomba fijerin'ireo mpitoraka bilaogy ireo ny Andron'ny Tany 2008.
Afrika Atsimo no anombohana azy: manontany tena ao amin'ny bilaogy carbon copy, i Rory raha toa ka tsy araka ny tokony ho izy ny fiheverantsika ny momba ny Andron'ny Tany. Manondro lahatsoratra iray momba io lohahevitra io izy ary mametraka fanontaniana …”ho tafavoaka velona ny planeta – fa isika ahoana ?”
Ilaina ny mampifanaraka ny valan-javaboahary amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro hoy ny soratra nataon'i Juan ao amin'ny bilaogy changing climates (toetrandro miovaova) tamin'ny fanomezana ohatra ny valan-javaboahary nasionalin'i Etosha.
… Niaina tondradrano lehibe, angamba ny lehibe indrindra tato anatin'ny 40 taona, izay noho ny fanondrahany ny lemaka lehibe, dia niova avokoa ny fahazarana amin'ny sakafo sy ny rano fisotron'ireo karazam-biby rehetra. Tsy voatery ho ratsy ny fiovàna, fa ilàna fahamalinana ny fanarahamaso mba hahazoantsika antoka fa ataontsika ny zavatra rehetra mba hananganana rafi-piarahamiaina matanjaka. Ireo karazam-biby sasany dia nahazo rano betsaka tampoka noho izay fampiasany, ka manavesatra ny fahafaha-mizàkany, raha toa amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy mihaza ireo karazany hafa miparitaka satria tsy voatery hivondrona manodidina ny lavadrano iray ny haza. Izany no vanim-potoana vaovao ho an'ny tontolon'ny fiainana am-pihenjena any Afrika, ary tokony hiova manaraka izany ireo faritra arovana.
Manao jery todika ny tantaran'ny Andron'ny Tany i Urbansprout, ary misaintsaina ny antony tsy nisian'ny hetsika tany an-toerana nandritra ny Andron'ny Tany. Asongadin'ilay bilaogy ihany koa ny olana lehibe ara-politika sy ara-toekarena mifamatotra amin'ny tontolo iainana.
Hetsika manan-kaja izay mendrika henoina ny Andron'ny Tany. Gazety iray tao an-toerana no nanatona anay mba hikaroka izay nataon'ny Afrikana Tatsimo hankalazana ny Andron'ny Tany. Na teo aza ny fikarohana lalina dia tsy nahazo na inona na inona izahay, na inona na inona, nahilika noho ny disadisa ankapobeny izahay, ny tsy fahampian'ny fanentanana sy ny tsy fahatomombanana marobe teto an-toerana ( ny fatapahan'ny jiro, ny krizin'ny Zim, ny sompatra mandreraka ataon'ny mpanao politika…)
Saingy tsy vokatry ny tsy fisian'ny fanahiana no tsy nisian'ny hetsika ao an-toerana. Raha toa ka tsy mifantoka mihitsy amin'ny tontolo iainana tahaka ny ankehitriny izao tontolo izao – milaza ireo mpisehatra rehetra avy amin'ny orinasa sy ny indostria fa miezaka mba hanavotana ny planeta ; manao ny fanentanana haivarotra iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ireo governemanta sy ireo mpandraharaha – fa tsy noheveriny tsotra izao mihitsy ny Andron'ny Tany, mba hampiredareda ny làla-maitso arahan-dry zareo maneran-tany.
Shina: Nozarain'i David Suzuki ao amin'ny bilaogy China Dialogue ny famelabelaran-kevitra nataona profesora iray mampianatra ny fampandrosoana maharitra ao amin'ny Oniversiten'i Kolombia Britanika. Hamafisin'ilay famelabelaran-kevitra fa “Tsy maintsy apetratsika ao andamosin'ny toekarena ny ‘ekolojia’ “
Amerika: Navoakan'ilay manampahaizana manokana momba ny politikan'ny Ekolojia, Tim Hurst ny ambangovangon'ilay didim-panjakana navoakan'ny governoran'i Colorado, izay manana fandaharanasa voafaritra momba ny tontolo iainana.
Mandinika ireo tantara tsara indrindra momba ny Andron'ny Tany, i Sarah Kuck avy amin'ny Worldchanging, ka manamarika fa :
Tamin'ny fankalazàna ny Andron'ny Tany teo aloha, dia niandry ny fidangan'ny atontanisa momba ny loto, ny fiovaovàn'ny toetrandro sy ny faharavan'ny tontolo iainana ireo mpamaky ny gazety mahazatra. Fa tamin'ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Tany 2008, izahay ato amin'ny Worldchanging dia nanamarika fa hafa ny fandrakofana tamin'ity taona ity. Tsy hoe satria nihena ny fahasimbàna, fa satria fantatray ireo olana ireo ary nitombo ny fifandraisanay amin'ireo olana ireo. Mahafantatra ny olana izao ny ankamaroan'ny olona, tsy ny famaritana ny olana mba hanampiana ny olona hikaroka vahaolana no votoatin'ireo lahatsoratra fa fara-faharatsiny tolotra sy vokatra misy marika ‘eco’ no atolotra ho vahaolana.
Mizara ireo vakiteny sasany momba ny Andron'ny tany ao amin'ny bilaogy ‘Its Getting Hot in Here’ (Miha-mafàna eto izany) i Cascadia Brian.
Israely: Hanokana andian-dahatsoratra ho an'ireo orinasa sy fandraharahana israeliana izay manavao indray ireo fitaovana efa niasa ny The Green prophet . Tamin'ny Andron'ny Tany dia nasongadin'i Karen ireo loharanom-baovao roa amin'ny aterineto izay mamporisika ny fampiasana izany indray any Israely.
Avy any Yehuda ny teboka fiaingànay izay mahita ilay dia an-tongotra ho tahaka ny ‘hetsika mikendry zavatra voafaritra manokana’ any Amerika. Ampifanoheriny / ampilahariny amin'ny fandehanana an-tongotra mandavan-taona ataon'ireo vondrona tanora israeliana mpihanika, ny sekoly ambaratonga faharoa, ny andron'ny sekoly, ireo vondrom-piarahamonina, ireo fikambanana sy vondrona mpitondra mpizahatany izany.
Ka arahaba nahatratra ny Andron'ny Tany. Mivoaha ary mandehana amin'ny taninao. Ny firenenao. Ny planetanao. Dieny mbola manana azy ianao.